Fampiharana - Wuxi Boln Laser Tech Co., Ltd.
Ny teknolojia fanamarihana dia mihatra amin'ny indostrian'ny faritra, afa-tsy ny fanamarihana isa isa, ny masontsivana izay afaka mitantana mpamatsy ihany koa ary mahatratra ny fahaizan'ny vokatra ary avy eo ampiasaina hiambenana amin'ny vokatra sandoka sy ambany.
Ny fitantanana ny mpamatsy dia miseho indrindra amin'ny fanamarihana ny laharan-dahatsoratra, ny anarana ary ny logo amin'ny faritra mandeha amin'ny fiara, ary avy eo mifandraika amin'ny tahiry, ny fanaraha-maso ny habetsahan'ny vokatra sy ny karazany, amin'ny farany fanatanterahana ny asan'ny fangatahana sy fanaraha-maso ny fikorianan'ny vokatra ary ny fivarotana ifanarahan'ny mpivarotra.
Ny asa fanoherana sandoka dia mampiseho indrindra amin'ny fanamarihana isa nomerika sy sary manokana an-tsokosoko, ary ahafahan'ny faritra rehetra azo ekena mivantana, na hijerena amin'ny alàlan'ny solosaina arakaraka ny isa marika, izay mifehy tsara ny fivezivezena vokatra tsy tena izy.
Ny sary manamarika dia tsy mora voafafa, mampitombo ny hery fanoherana ny sandoka.
Fanamafisana ny fitantanana ny fitakiana vokatra, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famerenenan'ny vokatra ny kilema, ary mahatsapa ny ampahany lehibe amin'ny fanangonana fampahalalana sy ny fahaiza-mamantatra ny kalitao.
Ny masinina fanamarihantsika dia afaka manamarika ny famaritana, ny laharana andiany ary ny isa eo ambonin'ny vokatra, ampiasaina amin'ny singa elektronika, mpanova, mpampifandray elektronika, board circuit, plastika, vy, batterie, plastika mazava, fitendry, motera kely ary switch.
Betsaka ny singa sy tabilao mihodina no mila asiana marika sy kaody amin'ny indostrian'ny fitaovana elektronika, amin'ny ankapobeny manamarika ny isa ampaham-potoana, ny fotoana famokarana ary ny daty fananganana trano fivarotana. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mampiasa pirinty na fanoratana amin'ny lamba landy, ary ny sasany kosa mampiasa milina fanamarihana laser.
Ny fitaovantsika dia mampiasa teknolojia fanamarihana tsy misy fifandraisana izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famaritana vokatra amin'ny indostrian'ny elektronika. Na fanoherana kely, fahaiza-manao, mpampitohy, na switch lehibe sy faritra, ny masinantsika dia afaka manisy marika ny teny, ny isa, ny kaody bara ary ny sary.
Elektronika sy semikonductor
Ny teknolojia laser dia napetraka amin'ny indostrian'ny fonosana. Ny fitaovana laser dia afaka manamarika ny daty famokarana, ny daty famaranana, ny isa isa, ny logo, ny kaody bara amin'ny fonosana vokatra misy ranoka sy matevina. Mandritra izany fotoana izany, azo ampiharina amin'ny fitaovana fonosana maro izy io, toy ny boaty baoritra, tavoahangy plastika PET, tavoahangy fitaratra, sarimihetsika mitambatra ary boaty firapotsy.
Ny fitaovana laser dia azo ampiasaina amin'ny paraky, tsy ho an'ny famantarana ny mombamomba ny vokatra sigara (ohatra sigara Carton na sigara boaty avy amin'ny ozinina paraky), fa koa hanamarihana ny vahaolana toy ny anti-counterfeiting, fitantanana varotra ary ny fanarahana logistika.
Ny teknolojia fanaovana marika dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny tariby sy tariby, azo ampiharina hanamarihana anarana, logo ary isa amin'ny vokatra tariby misy famaritana sy habe samihafa. Tsy fanamarihana fotsiny rehefa mivoaka ny akora, na rehefa mifofofofo ny tariby; tsy ampiasaina amin'ny tsipika famokarana haingam-pandeha haingam-pandeha fotsiny, na amin'ny takelaka misaraka, ny fitaovana laser dia afaka manamarika amin'ny lafiny samihafa, zoro fanontana 360 degre, boribory, miolakolaka, soritra, sns; na manisy marika marika, famaritana, daty avy any ambany, sisiny ary ambony.
Ny milina fanamarihana laser an'ny BOLN dia mifanaraka amin'ny fenitry ny indostrian'ny tariby sy ny fangatahana fampiharana manokana, azo ampiharina hanamarihana ny tsipika famokarana haingam-pandeha (500m / min). Ny marika laser dia ahafahan'ny teny tsy mitafy sy manjavona rehefa mifofofofo ny tariby. Ny toetra faran'izay kely indrindra dia 0.8mm. Ny fitaovantsika dia afaka manamarika sary, logo ary mari-pahaizana mahazatra isan-karazany, toy ny TUV, UL, CE, ary afaka mifandray amin'ireo fitaovana elektronika hafa, toy ny milina fanodinana, milina fanapahana, fitaovana fandanjana sns, mifandray amin'ny rafitra fitantanana mandeha ho azy ihany koa.
Tariby sy tariby
Ny fanamarihana laser dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fitaovana, vokatra vy azo amidy toy ny vy, varahina, vy vy, volamena, firaka, aliminioma, volafotsy ary oksida metaly rehetra.
Ny milina fanamarihana laser dia afaka manamarika lahatsoratra isan-karazany, laharana serial, isa vokatra, kaodim-bara, kaody QR, daty famokarana, ary mety hahatratra ny fanamarihana marika. Ny teny sy ny sary marika dia mazava sy marefo, ary tsy azo hofafana sy ovaina, izay mahasoa amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fanarahana fantsona, ary afaka misoroka tsara ny fivarotana ireo vokatra lany daty, fanoherana sandoka ary fanoherana ny fantsona. .
Ny teknolojia laser dia napetraka amin'ny indostrian'ny fanomezana. Toy ny fitaovana fanodinana mandroso miaraka amin'ny toetran'ny hafainganam-pandeha haingana sy ny fahombiazana avo lenta amin'ny fikarakarana tsy misy fifandraisana, ny fanamarihana laser dia tsy misy fandaniam-bola ary manamarika sary dia tsara sy tsara tarehy, tsy mitondra mihitsy. Ho fanampin'izay, ny fizotran'ny fanamarihana dia malefaka be, mampiditra lahatsoratra sy sary fotsiny amin'ny rindrambaiko. Ny masininay dia afaka mampiseho ny vokatra tadiavinao ary koa mahafeno ny filan'ny mpanjifanay manokana.
Ny toetran'ny masinina avo lenta dia mety indrindra hanamarihana peratra kely, sarobidy rojo ary firavaka hafa, hahatratrarana marika maharitra maharitra. Ny marika manokana dia malaza kokoa amin'ny mpanjifa amin'ny sehatry ny firavaka, toy ny fanamarihana teny misy dikany manokana, fiarahabana ary sary manokana. Ho fanampin'izany, ny milina laser dia afaka manisy marika amin'ny fitaovana isan-karazany, varahina, vy tsy miova, sliver, volamena.